The kacha mma anyị hụtụrụla Train Njem Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > The kacha mma anyị hụtụrụla Train Njem Na Europe
Ewere ụgbọ okporo ígwè bụ otu n'ime ụzọ kasị mma isi na-enwe Europe kasị sinik mpaghara. Enwe ikpọ ugwu, ọdọ mmiri, Okirikiri osimiri na ịrịba feats nke engineering - Ndị a bụ The Kacha mma anyị hụtụrụla Train Njem na Europe.
West Highland Line sinik Train Njem, Scotland
All n'ụgbọ ahụ Hogwarts Express! Ọtụtụ n'ime ndị 264km njem bụ na a otu track nke na-enye a ghọta nke pụtara moors, lochs, ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị n'ime obodo na Britain na - na-agbakwunye a gbaara nke Harry Potter anwansi - na Glenfinnan viaduct ji site Hogwarts Express.
Nsoro: Paris ka Nice
Cue urọ tile akịrịka obodo nta, dozie ubi vaịn, na ọmarịcha-acha anụnụ anụnụ mmiri!
A ndepụta The kacha mma anyị hụtụrụla Train Njem na Europe ga-ezu na-enweghị ihe South-of-France. Ọ bụ ma ama n'ihi na ya mara mma, n'ihi ya, ọ bụ ọ na anya ya mere anyị ndepụta. Malite na Paris, na ị na-sunflower na lavender ubi nke Provence nanị awa abụọ mgbe e mesịrị. Jide n'aka na ị abịa gị ejiji, 'Ime ka ndị French Riviera abụghị ihe ị chọrọ gafee na Summer.
Rhine Valley sinik Train Njem, Germany
Soro akụkụ nke River Rhine dị ka ọ na-eme ka ụzọ ya si Koblenz ka Mainz. Ọ bụ naanị a iri-na-nkeji ride, ma n'ụzọ ahụ, ị ga-ahụ castles na ubi-vine-arapara osimiri si mkpọda. Ọ n'ezie anya dị ka ihe nke a fairytale!
Vienna na Koblenz Ụgbọ oloko
nri ụtụtụ Munich na nri abalị na Venice
3 mba, 3 x echiche. Na-awụlikwa elu on a ụgbọ okporo ígwè si Munich na Venice ma na-aṅụ na 3 mba uru nke ikpọ echiche. Nke a akara-agba ọsọ site na ụfọdụ ihe ndị kasị mma ugwu, osimiri, na n'elu ugwu na obodo nta dị Austria, Germany, na Italy. 3-in1 of The Kacha mma anyị hụtụrụla Train Njem na Europe.
Munich na Venice Ụgbọ oloko
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe na- ọ bụghị dị ka mmadụ jupụtara na ndị ọzọ na-anụ n'akụkụ, mgbe ahụ, a na njem bụ maka gị. Malite na oké osimiri, ukwu fjordland ngwa ngwa nye ụzọ nkpoda n'elu ugwu ihu na lush ahịhịa. Jide n'aka na-abịa hiking akpụkpọ ụkwụ, n'ihi na ụgbọ okporo ígwè na-akwụsị na ọtụtụ ebe hiking ụzọ ụkwụ.
Anyị ikpeazụ a post of sinik Train Njem na Europe bụ, Abanye glasia awara awara!
St. Moritz ka Zermatt. 8 awa nke dị ọcha sinik ụtọ. Ọ na-adịghị na-akpọ glasia Express n'ihi na ọ dịghị. Njem site a odida obodo nsọ na Europe na ụgbọ okporo ígwè (tinyere Bernina) bụ a UNESCO World Heritage Site; ọ bụ nakwa obibi na mmiri nke dike Rhône na Rhine Rivers.
Ya mere ugbu a na ị na-eme na-agụ, ị dịla njikere ime ka gị onwe sinik ụgbọ okporo ígwè na njem na Europe, na Save A Train anyị nwere ihe kasị mma ụgbọ okporo ígwè tiketi njem, na ndị dị ọnụ ala udu, na ọtụtụ ugwo nhọrọ.
Ị chọrọ Embed anyị blog post gị na saịtị, wee pịa ebe a: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/scenic-train-trips-europe/ - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)